Global Voices teny Malagasy · 29 Mey 2012
Tantara tamin'ny 29 Mey 2012
Syria: Nahatonga Izao Tontolo Izao Hampiaka-peo Ny Vonomoka Tao Houla
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana29 Mey 2012
Tamin'ny 25 May, ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny governemanta tao Houla, avaratra andrefan'i Homs, dia nidina an-dalambe teo amin'ny mitatao vovonana teo, tsy nanampo na dia kely aza fa hoe mety hivaly vonomoka feno habibiana tsy roa aman-tany ny hetsika fanehoan-kevitra nataon-dry zareo. Raha kely indrindra dia 116 no olona...
Nabeel Rajab: Mitohy Ny Tolona Any Bahrain
Bahrain29 Mey 2012
Navoaka tamin'ny alalan'ny fandoavana onitra $800 ny Filohan'ny Foibe Bahraini momba ny Zon'olombelona, Nabeel Rajab, hoy ny mpisolovava azy, Mohamed Al Jishi. "Ity no fotoana voalohany teo amin'ny fiainako nitanana ahy nandritra ny fotoana naharitra. Namafisin'ny zavatra niainako tany am-ponja ny finoako fa mpanao didy no mifehy antsika. Mila miziriziry...
Brezila: Ocas, Gazetiboky Manone Vintana Ho An'ireo Tsy Manan-kialofana
N y gazetiboky Ocas, naely nanomboka ny 2002 teny an-dalamben'i São Paulo sy Rio de Janeiro, dia mamoaka karazana votoaty marobe izay tsy ho hita mihitsy any anatin'ireo gazety mahazatra.. Fa tsy izay fotsiny : fitaovana iray tsy manam-paharoa ihany koa izy ho famerenana ireo mponin'ny làlana sy ireo nahilika,...
Karaiba29 Mey 2012
Azia Afovoany sy Kaokazy29 Mey 2012
Lesotho: Daty Voapetraka Hanaovana Fifidianana Solombavambahoaka 2012
Afrika Mainty29 Mey 2012
Hanao fifidianana solombavambahoaka i Lesotho ny 26 May, ao anaty herisetra politika. Ny Lesotho Political Parties Leadership Forum dia milaza fa hisy ny “kômandô” natsangana hamono ireo olona sangany amin'ireo fifidianana ho solombavambahoaka.
Karaiba: Ho Fanohanana Ny Renintsika
Ho fanomanana ny fetin'ny reny hodiavintsika, andao hojerena ny eritreritra mandalo sy ny resaka ataon'ny any amin'ny faritra Karaiba izay nankalaza izany tamin'ny alahady nialoha ny pentekositra teo. Samy manana ny andro hankalazana ny fetin'ny reny manko...
Ejipta: Tafatsangana Indray I Ahmed Shafiq
Navoakan'ny sombim-bokatra valim-pifidianana filoham-pirenena ejipsiana fiodinana voalohany fa ny kandidàn'ny Mpirahalahy Miozolomana Mohamed Morsi sy ny Praiminisitra teo aloha Ahmed Shafiq no hifanandrina amin'ny fiodinana faharoa hotontosaina amin'ny 16 sy 17 Jona. Niteraka hatairana tamin'ny maro tokoa ny fisongadinan'i Shafiq, iray amin'ny “feloul” na “sisa tavela” tamin'ny fitondrana Mubarak. Tarataratra ihany fa ny ankamaroan'ny...